मन्त्रीकै सक्रियतामा जडिबुटी तस्करी !::netpatrika
मन्त्रीकै सक्रियतामा जडिबुटी तस्करी !
नेपालगन्ज, १७ जेठ । अवैध जडीबुटी राखिएको आशंकामा बाँके प्रहरीले नौ वटा ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
शुक्रबार राती ९ बजे बाँके बर्दियाको सीमानामा पर्ने मानखोलाको नजिक बाँकेको सम्झना चोकबाट आठवटा र गनापुरबाट एकवटा ट्रक चालकसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो । नियन्त्रणमा लिइएका ट्रकहरु ना ३ ख ३१३४, ना ३ ख ४४६५, ना ३ ख ५४६२ ना ३ ख ६७१३, से १ ख ८२८, ना ३ ख ६९०४, ना ३ ख १०८, ना २ ख ९३८२ र लु १ ख ५११४ रहेका छन् ।
ट्रकमा एकजना वनका सुरक्षा गार्डसमेत रहेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिएका ट्रकहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको परिसरमा राखिएको छ । वन कार्यालय, राजस्व तथा जडिबुटी संघको प्रतिनिधीहरुको रोहबरमा ट्रक टाँचा खालिने प्रहरीले जनाएको छ । सामानहरु खोलेपछि मात्र अवैध समान भए नभएको पुष्टि हुने बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक शेखर कोइरालले बताउनुभयो ।
बझाङ देखि सामान लिएर कैलाली बर्दिया हुदै ट्रकहरु नेपालगन्ज आउँदै थिए । स्रोतका अनुसार वन कार्यालय कैलालीले पक्राउ गरेको ती ट्रक नेपालगन्जसम्मको छुट पुर्जी भएका कारण अनुसन्धानका लागि नेपालगन्ज पठाएइको थियो । जडीबुटी बर्तमान सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीको भएकोले चलखेल सुरु भइसकेको श्रोतले बताएको छ । यसको पुष्टि भने भइसकेको छैन ।